Q.M oo malaayiin doolar ugu deeqaysa Soomaaliya. – Hornafrik Media Network
Muqdisho (Hornafrik) –Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo hay’adaha gargaarka ee waddanka ka shaqeeya ayaa isla falanqeeyay Qorshaha ka Falcelinta Baahiyaha Bini’aadamnimado ee dalka kajira sanadka 2019.
Si kastaba ha ahaatee, colaado soo noqnoqday, isbedel ku yimid cimilada iyo deegaanka dartood waxaa laga cabsi qabaa in horumarkaas uu dib udhac ku yimaado. Intaas waxaa wehliya, baahiyaha bini’aadamnimadu waxay weli ka sarreeyaan halkii ay joogeen laba sano ka hor intii aysan bilaaban mashaqooyinka bini’aadamnimada la xiriira.
In ka badan 1.5 milyan oo qof oo u badan barakacayaal iyo reer miyi ayaa wajahaya xaalad cunta yari oo aad u adag waxayna u baahanyihiin kaalmo aan soo daahin si naftooda loo caymiyo. Nafaqa darradu aad ayay u sarreysaa guud ahaan waddanka. In ka badan 2.6 milyan oo qof ayaa gudaha dalka ku barakacsan oo ku nool duruufo aad u adag. Dadkani aad ayay u nugulyihiin waxayna u baahanyihiin adeegyada aasaasiga ah iyo daryeel.
Wasiirka wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka xukuumadda Federaalka ah ayaa uga mahadceliyay hawsha ay hay’adaha gargaarka dalka ka hayaan isagoona dhanka kale waydiistay in ay sii laba laabaan caawinaada ay siiyaan Soomaaliya si looga gudbo caqabadaha ku gadaaman horumarka dalka.
Al-Shabaab oo 100 Carruur ah ka Af-duubatay Gobolka Bakool
Askar iyo qof shacab ah oo lagu dilay Muqdisho.